सामाज कल्याण परिषद्को आगामी योजना के के ? - Naya Aawaj
सामाज कल्याण परिषद्को आगामी योजना के के ?
सामाजिक हितसँग सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट देशको सर्वाङ्गीण विकासमा टेवा पु¥याउने लक्ष्यले स्थापना भएको परिषद्ले सरकारको उद्देश्य र विकासका लागि साझेदार सङ्घ संस्थाको कार्यक्रमलाई लक्ष्यित वर्ग, क्षेत्रसम्म पुग्न पुलको काम गर्दै आएको छ ।
पिछडिएका, सिमान्तकृत वर्ग, क्षेत्र, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, महिलाको हक, हितको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने योजनामा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने परिषद्को उपाध्यक्ष मोनिका भट्टराई अधिकारीसँग गरिएको कुराकानी ।
तपाईले परिषद्को जिम्मेवारी सम्हालेपछि कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
–समाज कल्याणका कार्य गर्ने विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सङ्घ संस्थाका बीच समन्वयकर्ताका काम गर्ने समाज कल्याण परिषदको जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएकोमा खुसी छु । एजजिओ र आइएनजिओले सरकारको विकासको कार्य योजनाको मापदण्ड अनुसारकै परियोजना ल्याएका छन् । सरकारले परियोजना कहाँ लग्नुपर्ने हो, भनेर स्पष्ट खाका नबनाएकोले क्षेत्रिय प्राथमिकका विषयमा स्पष्ट नहुदा सङ्घ संस्थामा अन्योलता छ । यसकारण एजजिओ र आइएनजिओले सञ्चालन गर्ने विकासका कार्यक्रमबीच लक्ष्य अनुसारको तादम्यता देखिन्न । यस्ता अन्तर न्युनिकरण गर्न सरकारलाई आवश्यक नीति निर्माण गर्न समाजकल्याण परिषदको सहयोग रहनेछ । यो जिम्मेवारी चुनौतिपूर्ण अवसर हो भन्ने लागेको छ ।
ड्ड परिषद्सँग काम गर्ने सङ्घ संस्थाको काम गर्ने तरिका र प्रवृत्तिबारे के बुझ्नुभयो ?
देश विकासका लागि कार्यक्रम तथा लगानी भित्र्याएर समाजको सर्वागिण विकासमा पु¥याएको योगदान साच्चिकै सह्रानीय छ । सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार सरकारलाई नै सहयोग पुग्ने विकासका कार्यलाई सञ्चालन गर्दै आइरहेका छन् । उहाँहरूले गरेका कामले गरिवीको रेखामुनि बाँच्ने समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीसँगै जीवनस्तर उकास्नमा ठुलो योगदान पु¥याएको छ । तर एउटै स्थानमा धेरै विकासका कार्ययोजना ल्याउँदा त्यस परियोजनाको प्रभावकारिता हेरेर ल्याउँदा राष्ट्रको वैदेशिक सहयोगप्रति को परनिर्भरता घट्ने थियो । दुर्भाग्य वस हाम्रो देशमा औद्योगिक परिवर्तन आन्दोलन कहिल्यै आएन । जसले गर्दा आज पनि हामी वैदेशिक सहयोगको लिनुपर्ने वाध्यता छ । बैदेशिक सहयोग लिनु नै नराम्रो कुरो होइन तर जे कामका लागि भनेर सहयोग लिएका छौं । त्यस काममा हामी सबै सरोकारवालाहरू मन, बचन, कर्मले प्रतिवद्ध छौँ त भन्ने प्रश्न पनि नउठेको होइन । कुनै ठाउँमा ए भन्ने संस्थाले ५ वर्षका लागि काम गर्छ भने त्यही ठाउँमा अर्को वि भन्ने संस्था उही उद्देश्यका साथ जानु नपरोस् यस्ता कुराप्रति सङ्घ संस्था सचेत हुन आवश्यक देखिन्छ । काम गर्नु नै छ भने आफुले गरेका कामप्रति गर्व गर्न सकिने खालको किन नगर्नु होइन त ।
तर एउटै स्थानमा धेरै संस्थाले काम गर्न चाहने र दशौं वर्षसम्म एउटै कार्यक्रम, त्यहि निश्चित ठाउँमा लैजाने प्रवृत्ति पनि देखियो ।
ड्ड सङ्घ संस्था वृत्तमा परिषद्ले अनुगमनको नाममा दुःख दिन्छन्, भन्छन् नि । त्यसबारे यहाँको धारणा ।
ः मेरो विचारमा विद्यमान अनुगमन मुल्याङ्कन निर्देशिका÷कार्यविधिलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता देख्यौं । हामी आइसकेकापछि अनुगमन मुल्याङ्कनको कार्यविधी तथ्यामा आधारित समय सापेक्ष बनेको छ । र छिट्टै हामी त्यसको कार्यान्वयनमा जानेछौं । नेपालकै हितका लागि काम गर्ने सङ्घ संस्थालाई अनेक बहानामा दुःख दिन हुन्न भन्छु । सङ्घ संस्थाले पनि मन, वचन र कर्मले पारदर्शी रूपमा काम गर्नुपर्छ । परिषद् सङ्घ संस्थालाई नै समन्वय, सहयोग गर्ने निकाय भएकोले आउँदा दिनमा संस्थाहरूले दुःख पाउने छैनन् ।
ड्ड महिला भएकै नाताले संस्थाका कार्यक्रमलाई लैङ्गिकमैत्री बनाउन यहाँको तर्फबाट थप प्रयास पनि हुने गरेका छन् ?
–मैले समग्रमा नेतृत्वको हिसावमा सबै क्षेत्रको हितलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नुपर्छ तर कार्यक्रमलाई लैङ्गिमैत्री आँखाले हेर्ने चेतना भने स्वभाविक तवरले नै आउँदो रहेछ । महिला विविध कारणले अहिले पनि विकासको मुलधारबाट बाहिर छन्, धेरैजसो महिला घर, गृहस्थी र कृषि क्षेत्रमा संलग्न रहेकोले उहाँहरूको श्रमको मुल्य हुँदैन । कमाएको सबै घरका पुरूषले आफ्नो कमाईको रूपमा व्याख्या गर्ने र व्यवहारमा पनि त्यस्तै गर्ने प्रवृत्तिले महिला आर्थिक अवस्थामा कमजोर छन् । त्यसकारण महिलामाथि घरेलु र अन्य हिंसा बढि भइरहेको छ । परिषद्मा महिलाको क्षेत्रमा काम गर्छु भन्ने संस्थाको कार्यक्रम योजना र प्रस्तुतीप्रति मेरो ध्यानाकर्षण हुन्छ र मैले सुझाव पनि दिने गरेको छु ।
ड्ड क परिषद्को सुझावलाई सामाजिक सङ्घ संस्थाले कत्तिको सुन्ने गरेको छ ?
–धेरै संस्थाहरूले राम्रो काम गरेको छ । कुनै, कुनै संस्थाले भने अटेर गरेको पनि देखियो । संस्थाले परिषद्सँग समन्वय नगरी काम गर्न पाउँदैनन् । नचाहिने कुरामा दुःख दिदैंनौं, आवश्यक सुझावलाई मानेर कार्यक्रमको ढाँचा नसच्याए कार्यक्रम स्वीकृत हुन्न ।
ड्ड तपाईका आगामी योजना ?
–समाज कल्याण परिषद्को नीतिगत तथा संरचनागत प्रणाली र व्यवहारमा समय अनुकुल सुधार, प्रभावकारिता, जवाफदेहिता र विभिन्न सरोकारवालाहरूसितको सहकार्य रहनेछ । साथै विकासको मुलधारमा ल्याउन नसकिएको वा छुट्न गएको वर्ग, समुदाय, क्षेत्रको उत्थानसँग लक्ष्यित योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नेछु । विशेष रूपमा भन्नुपर्दा समाजकल्याण परिषदको परियोजना स्वीकृतिको लागि लाग्ने समय अवधि घटाउन आवश्यक छ । परिषदभित्रका प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाएर समाय सापेक्ष बनाउन लागिरहेका छौँ । यसो गर्नाले परियोजना स्वीकृत गर्न ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म लाग्ने समयमा कटौती गरेर २१ दिनमा स्वीकृत हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । हाम्रो लक्ष्य पनि यहि हो । यसबाहेक परिषद्का कर्मचारीलाई समय अनुसार चुस्त दुरूस्त काम गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि तालिमसहित परिषद्को छवि सुधार्न सामुहिक प्रयासको जरूरी छ । एकद्वार नीति अन्तरगत काम गरेर परिषदलाई गरिमामय संस्थाको रूपमा चिनाउने हाम्रो योजना रहेको छ ।
नेपाली समाजमा धेरै नै परिवर्तन भइरहेको छ । त्यसका लागि परम्परागत सोच र व्यवस्थाभन्दा बाहिर निस्केर विभिन्न क्षेत्र, समुदाय तथा सम्वन्धीत क्षेत्रमा काम गरिरहेका अनुभवी व्यक्ति, समुदायसँगको छलफल, सिकाईको आदान–प्रदान र तीब्र रूपमा परिवर्तन भइरहेको नेपाली समाज र जीवनशैलीलाई बुझ्ने र आवश्यक सहयोगको प्रवन्ध गर्ने प्रयासमा रहनेछु ।
‘मलाई ओलीजीले तीनवटा प्रस्ताव गर्नुभएको छ’
अब अदालतले जे भन्छ त्यही हुन्छ– कोमल वली